မြန်မာမလေး တစ်ယောက် မဟုတ်ပေမယ့် မြန်မာ ဆန်ဆန် ဝတ်ပြီး လှနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသူလေး – Let Pan Daily
မြန်မာ မလေး မဟုတ်ပေ မဲ့ မြန်မာ ဆန်ဆန် လေးဝတ်ပြီး လှနေ လို့ လူပြော များနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသူေ လးယနေ့ခေတ်မှာ တချို့ မိန်းကေ လးတွေဟာ ခပ်ဟော့ဟော့ အဝတ်အစားတွေ ကို ပိုမိုဝတ်ဆ င်လာကြပါတယ်…မြန်မာဆ န်ဆန် ရင်ဖုံးနဲ့ ထမီ ဆိုတာ မြန်မာ့ရိုးရာ အဝတ်အထည် ဆိုပေမယ့် ပွဲတက် ပွဲသွားေ လာက်သာ ဝတ်သလို ဖြစ်နေပါပြီ…..ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်ကို လာ လည် ကြတဲ့ နိုင်ငံခြား သူလေးတွေ ကတော့ မြန်မာဆန်ဆန် ဝတ်ဆင်တာ လေးကို အရမ်းကို သဘော ကျလာ ကြတာ တွေ့ရပါတယ်…
အခုလည်းပဲ မြန်မာ မလေး မဟုတ်ပေမယ့် မြန်မာ့ အကျႌလေးနဲ့ ထမီလေး ကို ဝတ်ပြီး အရမ်းကို ချစ်စရာေ ကာင်းနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသူေ လးရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေဟာ လူမှုကွန်ရက်မှာ ချီးကျူးေ နကြတာပါ…ပန်းရောင် ဝမ်းဆက် မြန်မာဆန်ဆန်ဝတ်စုံလေးကို ဝတ်ဆင်ပြီး ရိုက်ထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသူလေးရဲ့ ဓာတ် ပုံလေးတွေဟာ လူကြည့် များနေပြီး သဘော ကျနေကြတာပါ….
ခုလို မြန်မာဝတ်စုံလေး ကို တန်ဖိုးထားပြီး ဝတ်ဆင်တဲ့ နိုင်ငံခြားသူလေး ရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ကို ပရိသတ်ကြီးတို့ ကြည့်နိုင်အောင် ပြန်လည်မျှဝေ လိုက်ပါတယ်နော်.. မြန်မာမလေး မဟုတ် ပေမယ့် မြန်မာ ဝတ်စုံကို တန်ဖိုး ထားတဲ့ နိုင်ငံခြားသူလေးကိုလည်း ချီးကျူးစကားဆို ခဲ့ကြပါအုံးနော်…
ျမန္မာ မေလး မဟုတ္ေပ မဲ့ ျမန္မာ ဆန္ဆန္ ေလးဝတ္ၿပီး လွေန လို႔ လူေျပာ မ်ားေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသူေ လးယေန႔ေခတ္မွာ တခ်ိဳ႕ မိန္းေက လးေတြဟာ ခပ္ေဟာ့ေဟာ့ အဝတ္အစားေတြ ကို ပိုမိုဝတ္ဆ င္လာၾကပါတယ္…ျမန္မာဆ န္ဆန္ ရင္ဖုံးနဲ႔ ထမီ ဆိုတာ ျမန္မာ့႐ိုးရာ အဝတ္အထည္ ဆိုေပမယ့္ ပြဲတက္ ပြဲသြားေ လာက္သာ ဝတ္သလို ျဖစ္ေနပါၿပီ…..ဒါေပမဲ့ ျမန္မာျပည္ကို လာ လည္ ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံျခား သူေလးေတြ ကေတာ့ ျမန္မာဆန္ဆန္ ဝတ္ဆင္တာ ေလးကို အရမ္းကို သေဘာ က်လာ ၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္…
အခုလည္းပဲ ျမန္မာ မေလး မဟုတ္ေပမယ့္ ျမန္မာ့ အက်ႌေလးနဲ႔ ထမီေလး ကို ဝတ္ၿပီး အရမ္းကို ခ်စ္စရာေ ကာင္းေနတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသူေ လးရဲ႕ ဓာတ္ပုံေလးေတြဟာ လူမႈကြန္ရက္မွာ ခ်ီးက်ဴးေ နၾကတာပါ…ပန္းေရာင္ ဝမ္းဆက္ ျမန္မာဆန္ဆန္ဝတ္စုံေလးကို ဝတ္ဆင္ၿပီး ႐ိုက္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသူေလးရဲ႕ ဓာတ္ ပုံေလးေတြဟာ လူၾကည့္ မ်ားေနၿပီး သေဘာ က်ေနၾကတာပါ….
ခုလို ျမန္မာဝတ္စုံေလး ကို တန္ဖိုးထားၿပီး ဝတ္ဆင္တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသူေလး ရဲ႕ ဓာတ္ပုံေလးေတြ ကို ပရိသတ္ႀကီးတို႔ ၾကည့္ႏိုင္ေအာင္ ျပန္လည္မွ်ေဝ လိုက္ပါတယ္ေနာ္.. ျမန္မာမေလး မဟုတ္ ေပမယ့္ ျမန္မာ ဝတ္စုံကို တန္ဖိုး ထားတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသူေလးကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးစကားဆို ခဲ့ၾကပါအုံးေနာ္…
ဖမ်းဆီး ခံလိုက်ရတဲ့ ပိုင်တံခွန် နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အမဖြစ်သူကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် (အသံဖိုင်)
အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေး နဲ့ အထာ ကျကျ မိမိုက်လွန်း နေတဲ့ မော်ဒယ် ဝင်းရွှေရည်သင်း